uBenni unqobe esomqeqeshi ovelele kwi-DSTV PREMIERSHIP - Ilanga News
Home Ezemidlalo uBenni unqobe esomqeqeshi ovelele kwi-DSTV PREMIERSHIP
uBenni unqobe esomqeqeshi ovelele kwi-DSTV PREMIERSHIP
UKHALE wemuka nesicoco somqeqeshi ovelele uBenni McCarthy oqeqesha uSuthu, emcimbini wezindondo wePremier Soccer League (PSL)
obuyizolo ngeSonto kusihlwa eGoli. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
KWENZEKE okungajwaye-lekile emiklomelweni ye-Premier Soccer League (PSL) izolo ngeSonto ebusuku, kuqokwa uBenni McCarthy ongumqeqeshi wamaZulu FC nje-ngovelele ekubeni engayiqalanga isizini nale kilabhu ayihole yaso-nga isizini ikwi-top 2 eyisusa nga-semsileni.
USuthu luqede kule ndawo ye-sibili ngemuva kokudlala ingcwe-nga yebhola ngaphansi kukaBenni othathe izintambo ku-Ayanda Dlamini.
Nokhoke ukuqokwa kukaBenni kube wubulungiswa njengoba eqo-qe amaphuzu amaningi nxa kubhekwa irekhodi lemidlalo ayidlalile kunezimbangi zakhe, okunguManqoba Mngqithi noRhulani Mokwena abalolonga iMamelodi Sundowns eyizingqwele zeDStv Premiership.
UPeter Shalulile weSundowns nguyena olale ehleka kakhulu izolo ngemuva kokuthatha umklomelo weFootballer of the Season noweDStv Premiership Player’s Player of the Season. U-Evidence Makgopa weBaroka FC uklonyeliswe ngoweDStv Premiership Young Player of the Season (U/21).
UDenis Onyango ongunozinti weSundowns umuke noweDStv Premiership Goalkeeper of the Season kanti uNjabulo Ngcobo weSwallows FC uhlabane ngowe-DStv Premiership Defender of the Season.
UThemba Zwane weSundowns uhlabane ngoweDStv Premiership Midfielder of the Season kwathi uTeboho Mokoena weSuperSport United wamuka noweDStv Pre-miership Goal of the season.
UBradley Grobler weSuperSport United ube ngumgadli oha-mbe phambili ngokuvalela awu-16.
UDeon Hotto we-Orlando Pira-tes uhlabane ngoweMTN8 Last Man Standing kwathi uKhanyisa Mayo weRichards Bay wagoduka noweNedbank Cup Most Promi-sing Player (U/23) ngesikhathi uWashington Arubi weTshakhuma Tsha Madzivhandila enqoba oweNedbank Cup Player of the Tournament.
USiyanda Nyanga weSundowns uhlabane ngoweDStv Diski Challenge Rewired Player of the Tournament.
UTaahir Goedeman weCape Town City, uKamohelo Hoala weKaizer Chiefs, u-Asanda Buthelezi weMaritzburg United, uBoitumelo Radiopane wePirates bahlomule ngoweDStv Diski Challenge Rewired Top Goal Scorer/s ngokuvalela amagoli awu-6 umdlali ngamunye.
Previous articleIlanga Easter Promotion
Next articleBazobuyela ngokugcwele ezikoleni abafundi bamabanga aphansi